फेसबुकमा चिनजान भएर पहिलोपटक होटलमा पुर्यायो त्यसपछि…….. - Babal Khabar
सामाजिक सञ्जालमार्फत भएको चिनजानपछि प्रेममा डुबेका किशोर–किशोरीबीचको सम्ब’न्ध वियो’गान्त बन्दा किशोरी अस्पताल र किशोर जे ल (सु’धार गृह) पुगेका छन् ।
यो घ’टना भारतको महाराष्ट्र राज्यस्थित बैतूलको हो । शा ‘री’रिक स म्ब’न्धपछि कि’शोरीलाई उच्च रक्त’स्रा’बका कारण अस्पताल नै ब’स्नु परेको छ ।
उमेरका ना’बालिग किशोरबीचको फेसबुक मित्रता प्रेममा परिणत भएको थियो । मुल्ताई थाना इलाकास्थित एक गाउँमा बस्ने नाबालिग किशोरले किशोरीलाई ध ‘म्की दिएर महाराष्ट्रको सीमावर्ती प्रभटपट्टनमा भेट्न बोलाए, त्यहाँबाट उनले ती किशोरीलाई बैतूलमा लगे । एक धार्मिक स्थलमा घुमेपछि उनीहरु होटलमा छिरे, जहाँ उनीहरुबीच शा’ रि’रीक स ‘म्बन्ध बन्यो ।
सह’वा’सपछि किशोरीको स्वास्थ अव’स्था बि’ग्रियो । प्रा’इ’भेट पार्टबाट धेरै रग’ त बग्न थालेपछि यी किशोरले एक निजी डाक्टर कहाँ किशोरीलाई लिएर गए । तर, ती डाक्टरले यो केस हेर्न मानेनन् । त्यसपछि बा ध्य भएर ती किशोरले जिल्ला अ’स्पतालमा किशोरीलाई लगे ।
जिल्ला अस्प’तालले यी किशोरीको परिवारलाई उनी अस्प’तालमा भर्ना भएको जानकारी दियो । त्यसपछि यी किशोरीलाई थप उपचा’रका लागि नागपुर लगियो । यता, पुलिसले किशोरलाई प”क्राउ गरेर अहिले सु’धारगृहमा पठाइएको छ ।
त्यस्तै, यो पनि पढ्नुहोस्-
दुई वर्षअघिको एउटा रिपोर्टले गोरखाको धार्चे गाउँपालिकामा साढे ५ सय भन्दा बढी जोडीले उमेर नपुग्दै विहे गरेको देखाएको छ । २०६८ देखि २०७६ सम्ममा ५ सय ६३ जोडीले २० वर्ष अगावै विहे गरेका हुन् ।
‘यति छोटो अवधिमा बालविवाहको यो तथ्यांक डरलाग्दो हो । कुनै गाउँ छैन बालविवाह नभएको,’ पालिका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङ भन्छन्, ‘बाहिर गएर यस्ता तथ्यांक भन्दा पनि लाज लाग्छ । त्यसैले यसको न्यूनिकरण गर्ने रणनीति बनाउन लागेका छौं ।’ उमेर नपुग्दै चेतनास्तर कमजोर भएकोले उमेर नपुग्दै विहे गर्ने चलन धार्चेमा व्याप्त छ ।
त्यसबाहेक आर्थिक सामाजिक रुपमा कमजोर हुने गरेको उनको तर्क छ । ‘विहे पछि पढाई छोड्छन्, पैसा कमाउन लाग्छन् । मानसिक रुपमा तयार हुँदैनन् । आर्थिक अभावले केटा विदेशिनुपर्छ,’ एलिजा अघि भन्छिन्, ‘बच्चा, आमा र बुबा नै जोखिममा हुन्छन् । आमाकै शरिर कमजोर हुँदा बच्चा कस्तो होला र?’अधिकांशको १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा विहे भएको उनले जानकारी दिइन् ।
यसलाई रोक्न गैर सरकारी संस्था गुड नेवर्सले पनि सहयोग गरेको छ । ‘विवाह भएर दुख पाएका भिडियो देखाएर अरुलाई सचेत गराउन लागेका छौं । टोलटोलमा बालविवाहको कानुनी, व्यवहारिक र शारीरिक समस्याबारे जानकारी गराउने योजना बनाएका छौं,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘संघ संस्थाहरुको सहयोग मागेका छौं । माथिल्ला सरकारलाई पनि भनेका छौं ।’
अहिले पनि वर्षेनी बाल विवाह भैरहेको छ । सोमबार बसेको कार्यपालिका बैठकले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न रणनीतिक योजना बनाउने र वडास्तरीय बाल संरक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । हिमालयन डेली बाट साभार
Prevगायिका प्रविशा अधिकारीका श्रीमान अमेरिकामा के गर्छन ?
nextके प्रियंकाले निक जोनससँग ‘डिभोर्स’ गर्दैछिन् ? बाहिरियो यस्तो रहस्य !